Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Ozi ọhụrụ iji chebe ụwa nke NASA na SpaceX weputara » Page 3
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Safety • Oghere Uzo • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
"Ọ bụ mmetụta a na-apụghị ịkọwa akọwa ịhụ ihe ị na-etinye aka na ya ebe ọ bụ na 'okwu ndị dị na akwụkwọ' na-aghọ ihe dị adị ma malite na mbara igwe," Andy Cheng, otu n'ime nchọpụta DART na-eduga na Johns Hopkins APL na onye bịara. dabere na echiche nke DART. "Nke a bụ nanị njedebe nke mbụ omume, na DART nnyocha na injinịa otu nwere ọtụtụ ọrụ ime n'afọ ọzọ na-akwadebe maka isi ihe omume - DART si kinetic mmetụta na Dimorphos. Ma n'abalị a anyị na-eme ememe!"
Otu ngwa DART, Didymos Reconnaissance na Asteroid Camera for Optical navigation (DRACO), ga-agbanye otu izu site ugbu a wee nye foto mbụ sitere na ụgbọ elu. DART ga-aga n'ihu na-eme njem dị nso na mbara ụwa gburugburu anyanwụ maka ọnwa iri na-abịa ruo mgbe Didymos na Dimorphos ga-adị nso 10 nde kilomita (kilomita 6.8) site na Ụwa.
Usoro ntụzịaka siri ike, usoro ịnyagharị na njikwa, na-arụkọ ọrụ ọnụ na algọridim akpọrọ Small-body Maneuvering Autonomous Real Time Navigation (SMART Nav), ga-enyere ụgbọ elu DART aka ịmata na ịmata ọdịiche dị n'etiti asteroids abụọ ahụ. Usoro ahụ ga-eduzi ụgbọ elu ahụ na Dimorphos. Usoro a niile ga-eme n'ime ihe dị ka otu awa nke mmetụta.
Johns Hopkins APL ejisie na DART ozi maka NASA si Planetary Defence Coordination Office dị ka a oru ngo nke gị n'ụlọnga si Planetary Missions Programme Office. NASA na-enye nkwado maka ozi sitere na ọtụtụ ebe, gụnyere Jet Propulsion Laboratory na Southern California, Goddard Space Flight Center na Greenbelt, Maryland, Johnson Space Center na Houston, Glenn Research Center na Cleveland, na Langley Research Center na Hampton, Virginia. Ndị NASA's Launch Services Programme na-elekọta mwepụta a, dabere na ụlọ ọrụ Kennedy Space Center na Florida. SpaceX bụ onye na-eweta ọrụ mmalite maka ọrụ DART.